Fadexado & Musuqmasuq Xukuumadda Hore Ee Md Rayale & Masuuliyiin Badan | Somaliland.Org
September 23, 2010	Xogo Sugan oo Jamhuuriya ku soo Xaqiijiyey Masuuliyiin Badan oo u Daldalan Fadeexado Musuqmaasuq
Wasiirka Warfaafintu muxuu ka yidhi dammiinashada Xisaabiyaha TV-ga Qaranka oo lagu helay inuu lunsaday ku dhowaad $160 kun oo dollar?
Hargeysa (Somaliland.Org)- Qormada labaad ee dabagalka Jamhuuriya ka diyaariyey hawlgallada baadhisees ee Hantidhawrka Guud ka wado hay’adaha dawladda waxa aynu cadadka maanta ku soo bandhigi doonaa xogo xaqiiqda ku qotoma oo ku saabsan nooca fadeexadaha musuqmaasuq ee dul yuurura Wasaaradda Warfaafinta iyo masuuliyiinta u deldelan ee diiradda baadhayaashu saaran tahay iyo weliba halka waqtigan xaal marayo.
WASAARADDA WARFAAFINTA/TELEFIISHANKA QARANKA:
Gulufka baadhitaannada baahsan ee Hantidhawrka Qaranku bilaabay oo sida la filayo ku jihaysan dhammaan hay’adaha kala duwan ee dawliga ah, isla markaana la kowsaday isla maalintii uu xila xafiiska kala wareegay Hantidhawraha Guud ee cusub, waxa kaloo ka mid ah meelaha uu ka socdo Wasaaradda Warfaafinta, taasoo ay ka soo ifbaxeen fadeexado musuqmaasuq aad u culus oo lagu lunsaday hanti lagu qiyaasay ku dhowaad ilaa $160 kun oo dollar.
Telefishanka Qaranka oo maamul ahaan hore u hoos-tegi jiray Madaxtooyada, balse hadda la hoos geeyey Wasaaradda Warfaafinta, ayaa lagu sheegay halka xuddunta u ah fadeexadaha lunsiga hantida qaranka ee wejiga ugu horreeya ka soo baxay baadhitaannada Hantidhawrka Guud ku hayo qaybaha kala duwan ee Wasaaradda Warfaafinta.
Baadhitaannada Hantidhawrka Guud, ayaa sida xog-ururimaha Jamhuuriya xaqiijiyeen waxa loo haystaa xisaabiyaha Telefishanka Qaranka, kaasoo xabsiga loo taxaabay, balse markii dambe lagu sii daayey dammaanad si uu kooxda hantidhawreyaasha ah ugu fududeeyo hawlahooda baadhiseed.
Dabagalka ceebaha musuq ee ka soo baxay baadhitaannada ku socda Wasaaradda Warfaafinta, ayaa xaqiijiyey in Wasiirka Warfaafintu dammiintay Xisaabiyaha TV-ga Qaranka, kadib markii baadhayaasha ka socda Hantidhawrka Guud ku heleen inuu sifo khaldan ku lunsaday qalab kuwa xafiisyada ah oo qiimihiisa lagu sheegay ilaa $80 kun oo dollar, isla markaana afar jeer oo kala duwan ka muuqda dalabaadyada xisaab-socodka miisaaniyadda ee telefishanka, lacagtaas oo sida ilaha xogogaalka ahi caddeeyeen uu xisaabiyaha TV-ga ee wasiirku dammiintay laba goor oo hore ku qaatay min $80 kun oo doollar, haddana laba jeer oo kale ugu jiraan dalabka kharash-daymeedka ee haatan yaal xafiiska Xisaabaadka Guud.
Waxa kale oo xog-raadintaas Jamhuuriya ku ogaaday in xisaabiyaha telefishanka xukuumaddu maamusho ee dammiinka dibadda ku joogaa uu kooxda hantidhawrayaasha ah ee baadhaya u qirtay lunsina hantida inta intaa le’eg ee gacantiisa ku maqan.
Eedaymaha fadeexadda musuqmaasuq ee loo haysto xisaabiyaha waxa ugu muhiimsan xafiisyada TV-ga oo aanay baadhayaasha Hantidhawrku ku arag qalabka qiimihiisu u dhigmo 80ka kun ee dollar ee weliba labada jeer lagu qaatay, arrintaas oo muujinaysa in uu xisaabiyuhu alaabtaas ku qaatay lacag dhan $160 kun dollar, sidoo kalena ka fashilantay qorshe uu ku damacsanaa inuu laba goor oo kale ku qaato hanti dhan $160 kun dollar, waxana baadhitaankaas lagu ogaaday inuu qalabkaas afar jeer ka kala dalbaday meelo kala duwan – Dubai, Jabuuti iyo meelo kale – sida ka muuqata dukumentiyada raad-raaca ah ee laga helay hab-xisaabeedka Telefishanka Qaranka.
Geesta kale, Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Md. Cabdillaahi Jaamac Cismaan (Geeljire) oo isagana dhinaciisa Jamhuuriya wax ka weydiiyey xaaladda xisaabiyaha uu dammiinka ka yahay, ayaa sheegay in loo haysto xisaabo dawladdii hore ee uu la shaqaynayey, isaga oo xusay in Hantidhawrka Guud ka dalbaday inuu wada-shaqayn kala yeesho baadhitaannada musuqmaasuq ee ay ku daba joogaan.
“Waxay daba socdeen [Hantidhawrku] xisaabo xukuumaddii hore ahaa oo ay ka soo heleen dhinaca maaliyadda, markaa anaga waxba namay weydiine yarka xisaabiyaha ah oo maamulkii hore la soo shaqeeyey ayey xafiiskoodii u kaxaysteen oo Xeer-ilaaliyaha Guud ayaa nagu yidhi xisaabo hore ayaa wax laga weydiinayaa. Intaas ayuun bay arrintu ahayd, hanti kale oo gaadiid iyo waxyaabo kale ahna way sheegayeen,” ayuu yidhi Md. Cabdillaahu Jaamac Cismaan (Geeljire).
Wasiirka oo aanu weydiinay sababta sababta uu u damiintay xisaabiyaha telefiishanka oo arrimo musuqmaasuq lagu haysto, waxa uu ku jawaabay; “Horta dammaanad maaha oo qofka waxa la damiintaa marka la xidho, xadhiguna nidaam buu leeyahay oo waaran [warqad soo qabasho oo sharci ah] baa loo soo goostaa, balse sheekadu waxay ahayd markii xisaabiyaha la kaxeeyey in laga helo wada shaqayn oo wixii Hantidhawrku uga baahdo uu wada shaqayn kala yeesho, maadaama ay baadhayaan xisaabo xukuumadii hore ee Rayaale leedahay. Arrintuna intaa ayuun bay ahayd.”
Sidoo kale, hawlaha baadhista ah ee Hantidhawrka Guud ee ku hayo Warfaafinta, waxa kaloo uu ka socdaa hay’adaha kale ee wasaaraddaas hoosyimaad, sida waaxda wargeysyada Maandeeq Media Group iyo idaacadda Radio Hargeysa, kuwaas oo aan ilaa hadda xogo rasmi ah laga hayn waxyaabaha baadhayaashu kala kulmeen.
La soco qaybo kale oo ku saabsan fadeexado musuqmaasuq oo ilaa Maayar Jiciir is-daba-taxan oo Hantidhawrka Guud ka soo faqay Dawladda Hoose ee Hargeysa, Wakaaladda Biyaha iyo…..
Previous Post“Qofkii imaanaya Boorama, waxuu kusoo dagi doonaa Madaarka Boorama dhawaan” WasiirkaNext PostNuxurka warbixin Guddiga baadhista dhacdadii Galbeed maanta u gudbinayso Madaxweynaha	Blog